ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ဆည်ပေါက်ရွာ နေသူတို့၏ လူမှုရေး အခြေအနေများကိုစီးပွါးရေးနှင့်ယှဉ်တွဲလျက် ကွင်းဆင်းလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁၉၅၃ မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်အထိ) (Comparative Studies between Economic and Social Situations of People Living in Sepauk Village, Kyaukpadaung Township (1953 to 1973))
Please use this identifier to cite or link to this item: https://uyr.uy.edu.mm/handle/123456789/1120
ကျမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာမြန်မာပြည်အခြားအရပ်ဒေသများတွင် နေထိုင်သူများ အနေဖြင့် မိုးခေါင်ရေရှားရပ် ဝန်းရှိ ဆည်ပေါက်ရွာ နေသူများ၏ စီးပွါးရေး အခြေ အနေကို စံနမူနာယူကြိုးစားနိုင်စေရန်၊ မနုဿဗေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှု သဘောအရ ဆည်ပေါက်ရွာသည် အခြားနိုင်ငံခြားသားလူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေးမှုများမှ ကင်းဝေးသည့်မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမိုးခေါင်ရေရှားရပ်ဝန်းရှိ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်အတွင်း၌ တည်ရှိပြီး ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်မှစ၍ယခုတိုင် မြန်မာလူမျိုးများသာ ဆက်ခံနေထိုင်သောရွာဖြစ်သောကြောင့်မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံ စစ်စစ်များကို တွေ့ရှိလေ့လာမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျမ်းတွင် ဆည်ပေါက်ရွာ၏နောက်ခံ သမိုင်း၊ ပထဝီအနေအထား၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ၊ အိမ်ခြေ၊ လူဦးရေနှင့်လူမျိုး၊ စီးပွားရေးအခြေအနေများ၊ လူမှုရေးအခြေအနေများ (၁၉၅၃ မှ ၁၉၆၂) နှင့် (၁၉၆၂ မှ ၁၉၇၃) ကို ယင်းတို့၏စီးပွားရေးနှင့် ယှဉ်တွဲ၍အောက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍများအလိုက် အသေးစိတ်လေ့လာတင်ပြပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ် တင်ပြထား ပါသည်။ (၁)လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့်ဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍ(၂) ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားကဏ္ဍ(၃) ပညာရေးကဏ္ဍ (၄) နိုင်ငံရေးသဘောတရား ကဏ္ဍ (၅) ဘာသာရေးနှင့် မိရိုးဖလာ ယုံကြည်မှုကဏ္ဍ (၆) တရားဥပဒေကဏ္ဍ (၇) သုံးသပ်အကြံပေးတင်ပြခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ The aims of this research are to describe the economic coping strategies of people living in Sepauk Village, Kyaukpadaung Township, Dry zone, Middle Myanmar asamodel of Myanmar and practice like them, record the true Myanmar culture, tradition and customs from the Anthropological perspective because most villagers are Myanmar and their village was established by their ancestors' ancestors. And then, there was no communication with outsiders or foreigners. Background history of the village, geographical feature, governmental organization, household, population, races, economic situation, social situation (from 1953 to 1962) and (from 1962 to 1973) were described in this research. Especially, social relation and activities, health, sport, education, political concepts, religion, traditional belief, law and administration based on economy were discussed. When the research was conducted, the comparative study between Sepauk village and its the neighboring villages was also conducted.